News | अक्षय कुमार
News | Tag: अक्षय कुमार
अक्षय कुमारले आमिर खानको ‘लाल सिंह चड्डा’ र ‘रक्षा बन्धन’को क्ल्यासबारे यसो भने
एजेन्सी । अक्षय कुमार एकपटक फेरि आफ्नो आगामी फिल्मबाट बक्स अफिसमा दबदबा गर्न तयार छन् । केही दिन अगाडि अक्षयले दिल्लीमा ‘रक्षा बन्धन’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरेका थिए ।
अक्षयलाई लगातार असफलता, पछिल्लो फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पनि फ्लप
एजेन्सी । पछिल्लो समय बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्महरुले सफलता पाउन सकेका छैनन् । उनले पछिल्ला चार फिल्महरु फ्लप भएका छन् । उनको फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ ले पहिलो साता मात्र ५५.०५ करोडको व्यापार गरेको छ ।
अक्षय कुमारको फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज'ले पहिलो दिन कति कमायो ?
एजेन्सी । धेरै विवादमा फसे पनि अक्षय कुमार र मानुषी छिल्लरको ऐतिहासिक फिल्म ‘सम्राट पृथ्वीराज’ अन्ततः जुन ३ (शुक्रबार)बाट हलमा रिलिज भएको छ । प्रारम्भिक केही बिहान शोहरूमा फिल्म सुस्त गतिमा सुरु भएको थियो तर पछि गति लियो। यद्यपि फिल्मको पहिलो दिनको कलेक्शन ‘बच्चन पाण्डे’ र ‘द कश्मीर फाइल्स’ भन्दा कम रहेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कति छ अक्षय कुमारको ब्रान्ड मूल्य ?
एजेन्सी । बलिउडका ‘खिलाडी’ अक्षय कुमार सुर्तीजन्य पदार्थ कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फेरि एकपटक चर्चामा आएका छन् । अक्षय केही समयदेखि तंबाकू कम्पनीको विज्ञापन गरेको कारण ट्रोल हुँदै आएका थिए । सम्झौता सकिएपछि अभिनेताले यसबारे माफी मागेका छन् र अनुमोदनबाट कमाएको रकम समाजसेवामा खर्च गर्ने भएका छन् ।
किन आजसम्म पनि यी दुई सुपरस्टारले एउटै फिल्ममा एकैसाथ काम गरेनन् ?
एजेन्सी । अहिलेको समयमा बलिउडका दुई हस्ती हुन् अक्षय कुमार र आमिर खान । दुवै बलिउडका सुपरस्टार हुन् । ३० वर्षदेखि निरन्तर दुवैले बलिउडमा एकभन्दा अर्को सुपरहिट फिल्महरु दिएका छन् ।
‘बच्चन पाण्डे’ले सात दिनमा पनि ५० करोड कमाउन सकेन, यस पटक फ्लप भए अक्षय
एजेन्सी । बलिउड सुपरस्टार अक्षय कुमारको फिल्म ‘बच्चन पाण्डे’लाई दर्शकहरुले लामो समयदेखि पर्खिरहेका थिए । तर साजिद नाडियाडवालाको यो फिल्म सिनेमाघरमा यस्तो समयमा रिलिज भएको थियो, जब ३२ वर्षअघि कश्मीरी पण्डितहरूमाथि भएको अत्याचारको विरुद्धमा सिंगो देश एकजुट भएको थियो ।
‘बच्चन पाण्डे’को कलेक्शन ‘द कश्मीर फाइल्स’को नवौं दिनभन्दा कम
एजेन्सी । अक्षय कुमारको एक्सन कमेडी फिल्म ‘बच्चन पाण्डे’ले शुक्रबार बक्स अफिसमा औसत प्रदर्शन गरेको छ ।
फिल्म 'बच्चन पाण्डे'ले पहिलो दिन कति कमायो ?
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म बच्चन पाण्डेले बक्स अफिसमा राम्रो ओपनिङ गरेको छ । पहिलो दिन बच्चन पाण्डेले १२ करोड कमाउन सफल भएको बताइएको छ । अक्षयको फिल्मलाई प्रभासको फिल्म राधेश्यामले गर्दा पनि बक्स अफिसमा पनि असर गरेको अनुमान गरिएको छ ।
साउथको सुपरहिट फिल्म 'रत्सासन'को रिमेकमा अक्षय कुमार
एजेन्सी । बलिउड स्टार अक्षय कुमार साउथ फिल्म ‘रत्सासन’को रिमेक सुटिङका ​​लागि क्वीन अफ हिल्स मसुरी पुगेका छन् ।
रिलिज हुनुपुर्व नै विवादमा फस्यो अक्षय कुमारको फिल्म ‘पृथ्वीराज
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमार र मानुषी छिल्लरको आगामी फिल्म ‘पृथ्वीराज’ रिलिजअघि नै विवादमा फसेको छ । राजस्थानको गुर्जर समुदायले फिल्मलाई लिएर धम्की दिएको हो । फिल्ममा महाराजा पृथ्वीराज चौहानलाई राजपूत शब्द प्रयोग गरिएको गुर्जरहरूको दाबी छ । उनीहरुले पृथ्वीराज चौहान गुर्जर भएको बताउँदै आइरहेका छन् ।